Tahriibayaashii Ugu Badnaa Ayaa Gaaray Xiibaha Dalka Talyaaniga – STAR FM SOMALIA
Tahriibayaashii Ugu Badnaa Ayaa Gaaray Xiibaha Dalka Talyaaniga
Ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa soo badbaadiyay in kabadan afar kun oo qaxooti ah kuwaasoo soo raacay ilaa iyo 20 doon oo ka soo shiraacday xeebaha dalka Libya.
Soo badbaadintan ayaa noqotay tii ugu badneyd oo hal maalin kaliya laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Libya.
Illaa toddobo markab oo ay leeyihiin ciidamada badda Talyaaniga ayaa ka mid ahaa maraakiibta ka qeybgalay soo badbaadinta dadkan tahriibayaasha ah .
Labo Maraakiibta ciidamada ayaa illaa kun qaxooti ah kuwaasoo laga soo badbaadiyay labo doon oo ka samaysan alwaax oo halis ugu jirey in badda ku qaraqmaan ayaa ka mid ahaa qaxootiga la soo badbaadiyay. 14 ka mid ah doomanka la soo badbaadiyay ayaa ka sameysnaa caag iyadoo ay ku jireen dadka soo galootiga ah carruur iyo haween.
Dhinaca kale ugu yaraan lix ka mid ah dadka soo tahriibay kana soo jeeda wadanka Masar ayaa lagu xirey magaalada Palermo kadib markii lagu eedeeyay in ay mas’uul ka ahaayeen soo gelinta dad tahriibayaal ah oo ka soo qaxay dalka Masar.
Inkabadan 170,000 oo qaxooti ah oo ka soo qaxay qaarada Africa,Bariga Dhexe iyo Koonfurta Asia ayaa soo gaaray dekedaha ku yaal Koofurta dalka Talyaaniga sanadkii 2014kii halka dad ka badan 104,000 ay sanadkan soo galeen halka 135,000 ay tan iyo bishii Janaayo ay ka soo gudbeen dalka Greece. Kumanaan qaxooti ah ayaa waxa ay ku dhinteen inta ay ku soo jireen safarka ay ku doonayeen inay ku galaan qaarada Yurub.
Hool galka AMISOM Oo Maanta Tababar Ufuray Ciidamada Goonfur Galbeed(Daawo Sawirada)
Network 2013 strongly condemns the closure of two radio stations in Galgadud,